World Class High Quality Health Care
For your health and longer life, come to City Hospital Mandalayအသက်ကလေးရယ်တဲ့ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်က မြို့တော်ကိုခို
Patient Assistance Hotline +952 66851
HomeAbout UsMilestonesFacilities & ServicesOperation TheaterLaparoscopicI.C.UInpatient RoomLabour RoomDepartments & SpecialitiesEndoscopyInterventional Imaging CenterHaemodialysis CenterESWL DepartmentHealth Care Club MemberHealth Screening & PackagesService TypesPatient Relationship CenterPatients & Visitors GuideContact Us
Home Facilities & Services Health Care Club Member
Termination of Membership: Membership will become invalid 1. If annual renewal fee is not received after one year.
ရည်ရွယ်ချက် လူတိုင်းကျန်းမာ၊ စိတ်ချမ်းသာ၊ ရောဂါဘယဘေး၊ ကင်းစင်ဝေး၊ ငြိမ်းအေးကြစေရန်။
အသင်းသားတစ်ဦးချင်းအတွက် ပဏာမ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊နှစ်စဉ် ၏တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ပုံမှန်ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးခြင်းများ(ဆီး၊ဝမ်း၊သွေးနီအား၊အဆီဓါတ်၊အချိုဓါတ်၊နှလုံးစမ်းခြင်း၊ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း) တို့အတွက် ကျသင့်ငွေထပ်မံပေးဆောင်စရာမလိုခြင်း။ Type I (For General Patient) [ Urine RE , Stool RE , Haemogram , ESR ,Fasting Lipit Profile , Fasting Sugar , Urea , Creatinine , L.F.T , ECG , CXR, USG] (Initial Free Medical Check up and yearly check-up) Type II ( For Renal Patient ) [ Urine RE , Stool RE , Haemogram , ESR ,Fasting Lipit Profile , Fasting Sugar , Urea & Electrolyte (U&E) ,Creatinine , L.F.T , ECG , CXR, USG] (Initial Free Medical Check up and yearly check-up) Type III ( For liver Patient ) [ Urine RE , Stool RE , Haemogram , ESR ,Fasting Lipit Profile , Fasting Sugar , Urea , Liver Profile , AEP , OSPT , Creatinine , ECG , CXR, USG] (Initial Free Medical Check up and yearly check-up)
အသင်းသားများသည် အထူးကုဆရာဝန်ကြီများကို တွေ့ဆုံရန်နှင့် အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများနှင့်တွေ့နိုင်မည့်အချိန်ကို ဆေးခန်းမှ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းမရှိဘဲ လျင်မြန်စွာ ပြသနိုင်ရန် ဦးစားပေးအဆင့် ရရှိစေခြင်း။
အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများညွှန်ကြားသောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ၊ ဓါတ်မှန် စစ်ဆေးမှုများ၊တီဗွီဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများကို ဦးစားပေးအမြန်ဆုံး ပြည့်စုံအောင်ဆာင်ရွက်ပေးမှုရရှိစေခြင်း။
အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများညွှန်ကြားသည့် ဆေးဝါးများကို သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက် (၂%) လျော့၍ ၂၄-နာရိ ရောင်းချပေးခြင်း။
အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ကို အသုံးပြုပါက အသုံးပြုခ (၁ဝ%) သက်သာမှုရရှိခြင်း။
ဆေးအဖွဲ့ပါသော အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်ကို အသုံးပြုပါက အသုံးပြုခ (၁ဝ%) သက်သာမှုရရှိခြင်း
ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သိထိုက်သောအချက်များ၊ ကျန်းမာရေးပညာပေးစာစောင်များကို အသင်းသားများထံသို့ အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း။
အခြားရောဂါရှာဖွေရေး စမ်းသပ်မှုများအတွက် (၅%) လျော့ပေးခြင်း။
အတွင်းလူနာအဖြစ်တတ်ရောက်ပါက အခန်းခ (၅%) သက်သာမှု ရရှိ်ခြင်း။
ခွဲစိတ်ရမည့်လူနာဖြစ်ပါက ခွဲစိတ်ခနးခ (၅%) သက်သာမှု ရရှိ်ခြင်း။
မွေးလူနာဆိုပါက မွေးခန်းခ (၅%) သက်သာမှု ရရှိ်ခြင်း။
အသင်းသားသည် ဆေးခန်းသို့ ဆေးစစ်ခြင်း၊ ဆေးကုသခြင်းအတွက် လာရောက်ရာတွင် အသင်းဝင်ကဒ်များကို ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ အခွင့်အရေးမားကိုရရှိစေပါမည်။အသင်းဝင်ကဒ်ပြားများ ယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါက ဖော်ပြပါ အခွင့်အရေးများကို ခံစားခွင့်မရှိပါ။
၃ နှစ် နှင့်အထက် အသင်းဝင်သော အသင်းသားများအား Diamond Card ဖြင့်ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ဆေးဝါးများကို (၃%) ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများကို (၈%) ၊ လူနာအခန်းခများကို (၁ဝ%) သက်သာမှု ရရှိစေခြင်း။
နာတာရှည် ရောဂါရှိသူများအတွက်လည်း အသင်းဝင်ခွင့်ပြုသည်။
အသင်းသားဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် တစ်ဦးလျှင် အသင်းဝင်ကြေး ငွေကျပ်( ) နှင့် နှစ်စဉ်ကြေးကို Type I လူနာများအတွက် ( )၊ Type II လူနာများအတွက် ( ) ၊ Type III လူနာများအတွက် ( ) ထည့်ဝင်ရပါမည်။ နှစ်စဉ်ကြေးမှာ အခါအားလျော်စွာ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
မိသားစုဝင် (အတူနေ) ၅-နှစ်အောက် ကလေးများအတွက် နှစ်စဉ်ကြေးပေးရန်မလိုပါ။အသင်းသားလူကြီးပေးသွင်းထားသည့် အသင်းဝင်ကြေး ကျပ် ( )မှ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်သည်။လူကြီးအသင်းသားကဲ့သို့ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်။ ဤဆေးခန်းတွင် မွေးသောကလေးများသာ အကျုံးဝင်သည်။
အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲခြင်းအောက်ပါအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အသင်းသားအဖြစ်မှ ရပ်စဲသည်ဟု သတ်မှတ်မည်။
နှစ်စဉ်အသင်းဝင်ကြေး ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
မှတ်ချက် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မှ အသင်းဝင်ကြေးကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ဆေးခန်းသို့လာတိုင်း အသင်းဝင်ကဒ်ကို ယူဆောင်လာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အသင်းဝင်ကဒ်ပျောက်ဆုံးပါက ညိမ်း (သို့) မြို့တော်ဆေးရုံသို့ ချက်ချင်းအကြောင်းကြားရမည်။ ကဒ်ပြားတန်ဖိုးပေးဆောင်၍ ကဒ်အသစ်ထုတ်ယူရမည်။
အသင်းဝင်သည် လိပ်စာပြောင်းလဲမှုရှိပါက အကြောင်းကြားရမည်။
နှစ်စဉ်ကြေးကို သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်မှ တစ်လအတွင်း ပေးသွင်းရမည်။
နှစ်စဉ် ပုံမှန်ဆေးစစ်မှု ခံယူနိုင်ခြင်း၊ ဆေးစစ်ခံရန်မေ့လျော့မှုမရှိတော့ခြင်း။
ရောဂါကြိုတင်သိရှိရ၍ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု၊ အချိန်မှီ ဆေးဝါးကုသမှု ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းမှု သက်သာစေခြင်း။
ကျန်းမာရေးပညာပေး၊ လက်ကမ်းစာစောင်များ အခမဲ့ဖတ်ရှုနေရခြင်း။
ကျန်းမာရေးကို ပိုမို ဂရုစိုက်လာသောကြောင့် လူ့သက်တမ်းစေ့ နေနိုင်စေခြင်း။
ကျန်းမာခြင်းသည် ... လာဘ်ကြီးတစ်ပါး ၊ ကျန်းမာခြင်းသည် ချမ်းသာခြင်းအစစ် ဟု ပိုမို အသိဝင်လာစေခြင်း။
အသင်းဝင်ဖြစ်ပြီးပါက ညိမ်း နှင့် မြို့တော် မည်သည့်ဆေးရုံတွင်မဆိုအကျိုးခံစားခွင့် ရရှိစေခြင်း။
ညိမ်း နှင့် မြို့တော် ဆေးရုံများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသင်းဝင်လိုပါက Patient Relationship Center(PRC) ဌာနသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Help Line : 09-2054163, 09-402588253
Operation TheaterLaparoscopicI.C.UInpatient RoomLabour RoomDepartments & SpecialitiesEndoscopyInterventional Imaging CenterHaemodialysis CenterESWL DepartmentHealth Care Club MemberHealth Screening & PackagesService Types
Health Care Club Member Health Screening & Packages
4 Hours Service 12 Hours Service
© Copyright 2013. City Hospital Mandalay.